🥇 ▷ "Kuma diiwaan gashan shabakad" ✅
“Kuma diiwaan gashan shabakad”
In kasta oo Samsung ay tahay mid ka mid ah astaamaha qalabka guryaha iyo, xilligan, aaladaha loo yaqaan mobilada mobilada ee dunida oo dhan laga aqoonsado, kama dhaafna dhibaatooyinka qaarkood ee u keenaya raaxo-darri ku yimaada isticmaaleyaasheeda. Markan waxaan ku siinaynaa xalka haddii ay dhacdo in qalabkaagu tuuro calaamada ‘aan ka diiwaangashanayn shabakadda’.
Mid ka mid xaqiiqooyinka aad ku ogaan karto in taleefankaaga mobiladu uu ku yaallo xaalad “aan ka diiwaangashanayn shabakadda” ayaa ah inaadan awood u yeelan doonin inaad qabatid howlo sida internetka oo kale, wicitaan ama dirista farriimaha.
Waxay u egtahay in sababta ugu weyn ee dhibaatadan ay tahay wixii dhibaato ah ee shirkadda ama shirkadda taleefanka aad ka adeegato uu si toos ah u soo bandhigayo.
Xulashada ugu macquulsan ee lagu baabi’in karo qaladka ayaa ah, marar badan, in la dami aaladda oo batteriga laga saaro daqiiqado yar. Haddii ay dhacdo in taleefankaaga gacantu leeyahay batteriga aan laga saari karin, waad bilaabi kartaa oo cusboonaysiin kartaa nidaamka hawlgalka qaabkiisii ​​ugu dambeeyay.
Waa inaad ogaataa in qalalaasahaani uu aad u yar yahay, in kasta oo, haddii loo baahdo, ay saameyn karto aalad kasta oo sumadda leh.
Kuma diiwaan gashan shabakad
Mid ka mid ah sababaha suurtagalka ah ee aad ku heli karto kiiskaaga oo u muuqda mid ‘aan ka diiwaan gashanayn shabakadda’ ayaa ah Xayiraadda IMEI, oo badanaa dhacda markii la iibsanayo aalad la isticmaalay. Xaaladdan oo kale, waa inaad si buuxda u hubisaa isku hallaynta iibiyahaaga.
Sidoo kale, taleefankaagu waxaa laga yaabaa inuusan la jaanqaadi karin kaarka SIM-ka ee aad gelisay. Sababta ugu badan uguna fudud waa markii kaarka SIM-gaagu dhacayo oo aad u baahan tahay inaad ugu beddesho shabakad aad u cusub.
Waxaan rajeyneynaa inaad sida ugu dhaqsaha badan u xallin karto dhibaatadan foosha xun. La wadaag macluumaadkan kuwa laga yaabo inay u baahdaan.